Bloggers Of Bloggers: နှစ်သစ်ပိုစ့်
Bloggers Of Bloggers
Posted by ဆရာကြီး (ခေတ္တ ကျွန်းပေါ် ) Labels: မြန်မာ့အရေး
အာလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ။ အမိမြန်မာပြည်ကို အားလုံးပြန်သွားကြတော့ ကျနော်တို့ ရဲ့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်လှည့်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျန်ုပ်ရဲ့ မြန်မာပြည် အင်တာနက် ကြီးက သိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လား။ စကားမစပ် ဒီနှစ်သင်္ကြန်က တော်တော်ရုပ်ဆိုးသွားတဲ့ စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ရတယ်။ နဂိုကထဲက တင်းကြပ်တဲ့အထဲ ဗုံးပါ ပေါက်သွားတော့ ကြောင်တောင်တောင်ကြီးဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ ဗုံးပေါက်တဲ့ ပုံတွေကို တော့ အမောင် ညီလင်းဆက် ဘလော့ဂ်ကနေကြည့်ရတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေများ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ သတင်းတင်တဲ့ သူကို ပဲ ဗုံးခွဲသလိုလို ပြောတဲ့သူကပြော။ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ တော်တော်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတချို့ပေါ့။ သောက်ကျိုးနဲ နဲနဲလေး လွှဲပြီဆိုတာ နဲ့ အဆိုးရနဲ့ ပေးစားလို့ပေးစား။
ဒီကြားထဲရှိသေးတယ်။ ကိုယ့်အသက်ကိုယ့်ရွယ်ကိုမှအားမနာ။ လူငယ်နဲ့ဖတ်ဖြစ်တဲ့ လူကရှိသေးတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် အတိုက်အခံတွေထဲမှာ စောက်သုံးမကျတဲ့သူတွေ အရမ်းများလာပြီ။ အတိုင်းအခံ စောက်သုံးမကျတာ ပြည်သူတွေသိပါတယ်။ တော်တော်များများ အတိုက်အခံတွေပညာမတက်ကြဘူး။ အဆင့်အတန်းမရှိဘူး။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းရယ် ၊ စိတ်ဓတ်အဆင့်အတန်း တော်တော်လေးကို နှိမ့်ကြတယ်။ ၂၂ ကြာတာ မအံ့သြပါဘူး။ စောက်သုံးမှ မကျတာ။ သူတို့က ကယ်တင်ရှင်ယောင်ယောင် သူတို့ကို သူတို့ထင်နေကြတာ။ တကယ်တော့ တာဝန်က သူတို့မှာ အပြည့်ရှိတယ်။
မြန်မာပြည် ပြန်လည်ကောင်းစားကြည့်။ ဒင်းတို့တွေ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ညာအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီး လာပြီးနေရာတွေယူကြတော့မယ်။ ယူရမှာပေါ့ တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေဆို ဒင်းတို့တွေပဲရှိတာ။ အဲ့ဒီတော့ အတိုက်အခံတွေ ခင်ဗျားတို့အခုလိုပေးဆပ်နေတာ ( သနားလို့ မြှောက်ပြောတာ) တချိန်ကြရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် ပဲဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ စောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေ လျှောက်မပြောနဲ့။ ပေးဆပ်တာတို့ စွှန့်လွှတ်တာတို့။
တချို့များရှိသေးတယ်။ ဗုံးခွဲခံရလို့ သေသွားတဲ့ သူတွေကိုတောင် သေမှာပေါ့ စောက်ကမြင်းကြောသွားထနေတာကိုး။ သောက်ကျိုးနဲ။ လူလို မတွေးဘူး။ အဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေ မြန်မာ့အရေးမှာ အရမ်းများနေလို့ မအောင်မြင်ဖြစ်နေတာ။
နောက်ဆုံးတော့ အဆိုးရလည်း မကောင်းဘူး။ အတိုက်အခံဆိုတာ လည်း စောက်သုံးမကျဘူး။ အဲ့ဒီလို ပြောလို့ မနာနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်။ ငါ ဘယ်လောက်စောက်သုံးကြလဲလို့။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်ယုံ ပြောင်လဲစေချင်တဲ့ စိတ်တခုရှိတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိုင်ငံရေးသမား လို့ စောက်ရှက်မရှိ ခံယူထားဖို့ မထိုက်ဘူး။ ဘာစောက်လုပ်မှလည်းမလုပ်။ တနေ့တနေ့ အင်တာနက်ပေါ်တက် စိတ်နဲ့မတွေ့ရင် ၀င်ဆဲ။ ဟိုလူနဲ့ပေးစားလိုက်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတာ အများစု က နိုင်ငံရေးသမားတွေများတယ်။
ေ---ာက် ဆိုတဲ့ အသုံးကြီးကို ဖတ်ရတာ ထောင့်နေတယ်။ အဲဒါ မပါလည်း ရေးထားတဲ့ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
**အမှန်တိုင်းပြောရရင် အတိုက်အခံတွေထဲမှာ စောက်သုံးမကျတဲ့သူတွေ အရမ်းများလာပြီ။ အတိုင်းအခံ စောက်သုံးမကျတာ ပြည်သူတွေသိပါတယ်။ တော်တော်များများ အတိုက်အခံတွေပညာမတက်ကြဘူး။ အဆင့်အတန်းမရှိဘူး။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းရယ် ၊ စိတ်ဓတ်အဆင့်အတန်း တော်တော်လေးကို နှိမ့်ကြတယ်။**
ဆိုတဲ့ စကားကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျို့။ ပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစာ ဆရာမ တောင် တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှု အားနည်းပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ညံ့ဖျင်းနေရင် ကျန်တဲ့လူတွေတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတာ့။
သတိထားမလားမသိဘူးဗျ။ အဲ့ဒီ ပို့စ်မှာ ဘယ်သူဖက်ကမှားတယ်၊ ဘယ်သူ့ဖက်က မှန်တယ်ဆိုတာ သူငယ်တန်းကလေးဦးနောက်နဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရင်တောင် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံအားလုံးက ထောက်ခံထားတယ်ဗျ။ ငယ်နိုင် တို့ဆိုရင် http://nge-naing.blogspot.com/2010/04/blog-post_19.html တို့ဆိုရင် ပိုစ့်တစ်ခုတောင်တင်ပြီး မေငြိမ်းကို ထောက်ခံထားတာ။ သူငယ်တန်းဦးနောက်လောက်ကို မဆင့်မရှိတာပဲဗျို့။ အသက်ကြီးလေ ပိုဆိုးလေပဲဗျ။
anyway. ဆက်ရေးပါ။ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
April 22, 2010 at 1:23 AM
စောက် ကြီးကို မရေးချင်ပေမယ့်ရေးရတာပါ။ သူတို့က (အတိုက်အခံတွေ) ဗိုလ်ချုပ်ကို သိပ်ချစ်ကြတယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောမှ နားဝင်တဲ့ သူတွေဆိုတော့။
April 22, 2010 at 7:28 AM
မြန်မာလိုရေးသားနေတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်မှာ ဘယ်လိုစာအမျိုးအစားကိုပဲရေးရေး အရေးအသားကို ဂရုစိုက်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုစာရေးသူ တင်တဲ့ပိုစ့်ဟာဖြင့်ရင် စာအရေးအသားမှာ ညံဖျင်းလှတာကို ပေါ်လွင်တဲ့အပြင် စာရေးသူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလဲ ဖော်ပြရာရောက်တဲ့အတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စာတွေကို မရေးသားတတ်သေးဘူးလို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
April 27, 2010 at 8:03 AM
ဒီဘလော့ကိုတခါတရံ လာလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ဝေဖန်ရေးလုပ်တဲ့ဘလော့ဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့လည်း ဘာမှမပါတ်သက်တော့ ဗဟုသုတရအောင်ဆိုပြီး ဖတ်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေဖန်ရေးပုံစံဖြစ်မလာဘဲ ဘေးထိုင်ဘုပြော ပုံစံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ လူတယောက်ကို ဝေဖန်ရင်ဘာလို့အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းရတာလဲ။ အတိုက်အခံတွေလို့မပြောပါနဲ့။ အတိုက်အခံဆိုတာ အစိုးရအတိုက်အခံလို့ သတ်မှတ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတော်တော်များများပါပဲ။ သူများအဆင့်အတန်းကိုပြောမယ့်အစား ကိုယ်ကလည်း အဆင့်အတန်းရှိရှိ ကိုယ့်သဘောထားဝေဖန်ချက်ကို ရေးကြည့်ပါလား။ အခုတော့ နင်ဘာလုပ်လုပ် ဘေးကနေလမ်းကြုံဝင်ဆဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရင့်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာပါ။
May 4, 2010 at 2:59 PM
သင်္ကြန်တုန်းက ခေတ်စားသွားတဲ့ ဒေါ်မေငြိမ်း..
ဗလောင်းဗလဲ Nge Naing
မနေ့တနေ့က ရောက်လာတဲ့ ဂကြိုးဂကြောင် အဖွားကြီး မဗေဒ mabayda(နောက်မှ နာမည်အတုသုံးပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေသူ) သူတို့ အကြောင်းရေးပါဗျိုး......
May 17, 2010 at 3:09 AM
Rita ဆိုတဲ့ ကောင်မကလည်း သူ့ ဆီက ဓာတ်ပုံကို ကိုမိုးသီး ယူသုံးမိလို့သူ့ ဘလော့ဂ့်မှာ ရေးထားတာ သောက်ကျိုးနဲ။ အခုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။ စောက်ခွက်က အိမ်ဖော်မ စောက်ခွက်နဲ့ ။ စောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေ ပြောနေတယ်။
May 18, 2010 at 1:21 PM
ဒို့ မြန်မာ တို့ ဖတ်ဖို့
ကျားကြောက်လို့ ပြေးနေတုန်း ခွေးဟောင်တာကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။
စိတ်ကောင်းမရှိဘဲ ပြောဆိုရေးသား ပြုလုပ်နေသမျှဟာ မကောင်းသော ပြောဆိုပြုလုပ်မူတာဖြစ်တယ်။
လောကကြီးမှာ ကိုယ်က နိုင်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဘက်ပါလာကြပြီး သူကနိုင်သွားရင် သူဘက်ပါကြစမြဲပဲ။
လောကကြီးမှာ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံးလို့ ပြောကြတယ်၊ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရင် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ တရားတွေနဲ့ နစ်မွန်းနေရင် ချစ်ရာ မရောက်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်ရာ ရောက်နေပါတယ်။
12 . 10 . 2009
အဖြူရောင် နတ်သမီး (1)
Hide My Booty